सुनिता गुरुङको मृत्युको विषयमा गरिएको छानविन प्रतिबेदन खोई ? – Saurahaonline.com
सुनिता गुरुङको मृत्युको विषयमा गरिएको छानविन प्रतिबेदन खोई ?
सौराहा अनलाइन | २०७३, १० माघ सोमबार
चितवन १० माघ । गर्भवत्ति महिला सुनिता गुरुङको मृत्युको विषयमा छानविन गर्न गठन भएको समितिलाई पीडित पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण माग गरेका छन् । मृतक गुरुङका श्रीमान सहितको टोलीले सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण बारे जानकारी मागेका हुन ।
चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्युभएकी गर्भवत्ति महिला सुनिता गुरुङको विषयमा छानविन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य रहनेगरी छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एकसाता भित्र घटनाको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर घटना भएको ५० दिन पुग्दापनि सुनिता गुरुङको मृत्युको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि कारण बुझ्न टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अब शुक्रवार मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
छानविन समितिले नै प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेका कारण निर्धारित समयमा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनुभयो । विषय संवेदनशिल भएका कारण अध्ययन गर्न समय लागेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हो उहाँले भन्नुभयो – यो विषयलाई नकारात्मक नलिनुहोला । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्ष पदम गुरुङले सुनिता गुरुङको घटना प्रति प्रशासनले गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ कृष्णपुर बस्ने २५ वर्षकी सुनिता गुरुङ सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन चितवन मेडिकल कलेज पुग्नुभएको थियो । उपचारको क्रममा मंसिर २० गते उहाँको मृत्युभएको हो । मृतकका परिवारले चिकित्सक अस्पतालको लापरवाहीका कारण गुरुङको मृत्युभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।